Sweden: Shir Looga Hadlayo Somalia
Magaalada Lund ee dalka Sweden waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shir-cilmiyeed baaxad weyn oo looga hadlayo marxaladda siyaasadeed ee Somalia.
Furitaanka shirka waxaa ka hadlay masuuliyiin uu kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Somalia, Cali Jaamac Jangeli, isagoo ka warramay sida ay DKMG ah illaa haatan waxa uga qabatay xagga amniga, xagga dowlad-wanaagga iyo waliba ajandaha u yaalla dowladda, muddada kooban ee u hartay.
Wasiirka ayaa sheegay inuu qirsan yahay in dowladdiisu aaney sidii la rabay wax uga qaban arrimaha amniga, balse wuxuu qeyb ahaan eedda dusha uga tuuray beesha caalamka, oo uu sheegay inay illaa haatan ka caga-jiideyso inay si kal iyo laab leh u taageerto DKMG ah.
Wasiirka ayaa intaas ku daray in wax ka qabashada amniga oo kaliya aysan ku filneyn xal u helidda caqabadaha faraha badan ee hortaagan dowladdiisa, isagoo sheegay inay tahay in hannaan siyaasadeed oo hadafkiisu wadahadal yahay loo baahan yahay.
Mar uu ka hadlay howlgal millitari oo ay DKMG ah hadal heysay muddo dheer, ayuu sheegay in sababta howlgalkaas dib u dhigtay ay tahay dowladdiisa oo dooneyso inay fursad walba siiso xagga wadahadalka, inta aan xoog wax lagu muquunin. Balse wuxuu intaas raaciyey inay imminka u muuqaneyso in kooxaha kasoo horjeeda, gaar ahaan al-Shabaab, inaysan wada-xaajood dan iyo heello toona ka laheyn.
Xagga howlaha bani'aadannimada, wasiirka ayaa si kulul uga jawaabay khudbad ay jeedisay cilmi-baare u dhalatay dalka Talyaaniga, taas oo sheegtay in beesha caalamka ay ka fekerto inay gabi ahaanba faraha kala baxdo Somalia, iyadoo markaas laga yaabo in Soomaalidu ay dhexdooda xal ka raadiyaan.
Fowziya Warsame, oo shahaadada sare ee PhD-da ku diyaarisa Jaamacadda Toronto ee dalka Canada, kana mid ah cilmi-baarayaasha khudbadaha ka jeedinaya shirka, ayaa qabta aragti kasoo horjeedda midda wasiirka. Fowziyo waxay leedahay, beesha caalamku 20 sano ayay faraha kula jirtay Somalia, marka waxaa lasoo gaaray xilligii bal Soomaalida la isku deyn lahaa.
Laakiin aragti taa ka duwan waxaa qabta Dr. Aamina Saciid, oo reer Sweden ah, kana mid ah aqoonyahannada shirka kasoo qeyb galay. Aamina waxay ku doodeysaa in Soomaalidu ay wali u baahan tahay gardaadin.
Taageero iyo taageero la'aanba, galabta ayaa waxaa shirka ka hadlaya masuuliyiinta matalaya beesha caalamka, oo uu horkacayo wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay, iyo wakiillo ka kala socda IGAD, AMISOM, Midowga Yurub iyo dalalka dariska ah.
Mar uu ka hadlay howlgal millitari oo ay DKMG ah hadal heysay muddo dheer, ayuu sheegay in sababta howlgalkaas dib u dhigtay ay tahay dowladdiisa oo dooneyso inay fursad walba siiso xagga wadahadalka, inta aan xoog wax lagu muquunin.
Balse wuxuu intaas raaciyey inay imminka u muuqaneyso in kooxaha kasoo horjeeda, gaar ahaan al-Shabaab, inaysan wada-xaajood dan iyo heello toona ka laheyn.